१३ दिने वनमन्त्री हिजो यसरी घानमा परे - Himali Patrika
७ असोज २०७८, बिहिवार
हिमाली पत्रिका १२ साउन २०७८, 10:29 am
हिजो दिउँसो संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा रहेका १३ दिने वनमन्त्री नारदमुनी राना सांसदहरुको तारो बने । बोल्न पाइयो भन्दैमा प्याच्च नबोल्नु भन्ने उखान हिजो सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकमा सांसद रानामाथि लागू भएको हो ।
उनलाई सभ्य भाषामा अधिकांश समिति सदस्यले बैठकबाट बाहिर जान आग्रह गरेका थिए । नियमानुसार पनि उनी बैठकमा बस्न मिल्दैनथ्यो । बसे पनि मनपरी नबोलेको भए अवस्था विपक्षमा जाँदैनथ्यो ।
संसद सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘कुनैपनि सांसद मन्त्री बनेपछि संसदीय समितिको सदस्यबाट स्वतः हट्ने संसदीय परम्परा हो । हिजोको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि केही सांसदले त्यो नियम पालना नगरेपछि अवस्था चर्काचर्कीमा पुगेको बताइन्छ ।
सबैभन्दा पहिले बोल्ने क्रममा काँग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले संसद पुनर्स्थापनाको कुरो उठाएका थिए । समितिमा पहिले मन्त्री भइसकेका तीन जना सांसद थिए-नारदमुनी राना,मोहन बानिया र रेणुका गुरुङ । हिजोको बैठकको प्रारम्भमा राना र बानिया अनुपस्थित थिए ।
मन्त्री भइसकेका सांसदले पुनः समिति सदस्यको हैसियतले उपस्थित हुन चाहेमा संसद सचिवालयका महासचिवलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको थियो । त्यो कुरो बैठकमा उपस्थित रेणु गुरुङले सुनेपछि उठेर बाहिरिएकी थिइन् ।
बैठकमा मूलतः समितिको कार्य समीक्षाको एजेण्डा थियो । समितिले यसअघि सरकारलाई दिएको सुझाव र निर्देशनको प्रगतिको बारेमा समीक्षा गर्ने भनिएको हो । समितिले हेर्ने दुई वटा मन्त्रालयमा अहिले विभागीय मन्त्री छैनन् । परराष्ट्र र अर्को पर्यटन,संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि समितिले यसअघि दिइएका सुझाव र निर्देशनको समीक्षा गर्ने बताएको थियो ।
अर्को एजेण्डा भने विविध थियो । मोहन बानिया आएर माहौल मन्त्रीहरु यहाँ होइन है भन्ने खालको बन्दै गएको देखेपछि उनी त्यहाँबाट उठेर हिँडेका थिए । सांसदहरु दिव्यमणि,प्रकाशमान सिंह,उमा रेग्मी,सुरेन्द्र कार्की, बोधमाया लगायतले बोलिसकेपछि उनै पूर्ववनमन्त्री नारदमुनी राना बैठक कक्षमा छिरे ।
त्यसअघि सांसदहरुले बोलेको कुरो उनले सुनेकै छैन । उनी छिर्दा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको भनाई सकिन लागेको थियो । संसद पुनर्स्थापना भएको सम्बन्धमा त्यसअघि बोलेका सबैले झैँ नेपालले पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।
झ्वास्झ्वास्ती बैठक कक्षमा छिरेका नारदलाई नेता नेपालको कुरो सुनेपनि राम्रो लाग्ने कुरो पनि भएन । जबकि रानालाई मन्त्री भएको मान्छे बैठकमा किन भनेर यसअघिका दुई जनालाई झैँ सोधिएको पनि थिएन ।
त्यसपछि उनै राना बोले । नेता नेपाल र सांसद दीपकप्रकाश भट्टले बोलेको विषयमा कडा आपत्ति जनाउने शैलीमा उनले संसद पुनस्र्थापना परमादेशबाट भएको हो,जनादेशबाट होइन भन्न थाले । रानाले एमालेको बैठकमाझैँ हौसिएर बोले, ‘आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्री र सरकार हुँदा त्यसविरुद्ध बैशाख २७ गते तपाईं (नेपाल) कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? वरिष्ठ नेता भएर घरमा सुत्ने ? आफ्नो सरकार ढालेर संसद पुनर्स्थापनामा खुशी हुने ? आफ्नै सरकार ढाल्ने अनि विपक्षी गठबन्धनमा रमाउने ?’
त्यतिले नपुगेर रानाले आफूहरुले निकै राम्रो काम गरेको,संसद विघटन सबैभन्दा राम्रोमध्येको एउटा राजनीतिक निर्णय भएको बताइरहेका थिए । जबकि त्यसअघि कोरोना महामारीलगायतका राम्रा कुरामा समेत छलफल भएको थियो । तर राना अनुपस्थित भएकाले ती सबै कुरा सुन्न पाएका थिएनन् ।
माहोल सबैलाई अपाच्य भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापतिले रुलिङ गर्नुभयो । तर नारदमुनीले जथाभावी बोल्ने क्रम रोकिएन । त्यसपछि रिसले आगो हुँदै वरिष्ठ नेता नेपालले ‘प्रतिगमनको मतियार भएर ठूला कुरा गर्ने ?’ भन्दै रानालाई प्रश्न गर्नुभयो ।
अन्य सांसदले मन्त्री भइसकेको मान्छे समितिमा बस्न संसदका महासचिवको चिठी चाहिन्छ भन्ने आशयले बोले । राना संसद विघटनको पक्षमा रहेको सबैलाई थाहा थियो । त्यहि सन्दर्भमा नेपालले रानालाई प्रतिगमनको मतियार भएर ठूला कुरा गर्ने ? यो समितिमा किन आउने ? संसद विघटन नै राम्रो थियो भन्नेले राजीनामा दिएर खुरुक्क गए हुन्छ, किन सांसदको बीचमा आउने ? जनताको बीचमा गए भइहाल्यो नि भनेर जवाफ दिनुभएको थियो ।
त्यसपछि पनि सांसदहरु सुदन किराती दिव्यमणि,सरला यादव र चाँदतारा कुमारी सबैले नारदको विपक्षमा बोलेका थिए ।
बैठक सकिएपछि समितिका सदस्य सांसदहरु भन्दै थिए ‘१३ दिने मन्त्रीको यत्रो फूर्ति ?’ राना मन्त्रीबाट खुस्केपछि हप्तौंसम्म पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर नछाड्नेमध्येका एक हुन् । उनी कैलाली ५ का सांसद हुन् । उनले निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालाई पराजित गरेका थिए । राना पहिले रातो पासपोर्ट काण्डमा समेत परेका हुन् । साभार : जनआस्थाबाट
रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई सम्झिँदा पनि एलर्जी हुन्छ :…
माधव नेपालको बचन : ‘पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेवित्तिकै युवाहरुलाई रोजगारी…
साहिद अफ्रिदी ‘एभरेस्ट प्रिमियर लिग’ खेल्न काठमाडौंमा
नेपाली रुपैयाँसामु कमजोर बन्दै अमेरिकी डलर, अन्य देशको विनिमयदर, कुनको कति…
२७ वर्षे आईटी अफिसर सिद्धान्तको एउटा सोचले गर्दा चाँगुलाई विश्वकै…
ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्न कति सम्भव ? प्रतियुनिट १३…
सरकारले ४० बर्ष माथिका सबै नागरिकको पिसाब जाँच गर्ने
ओलीलाई खतिवडाको मात्रै चिन्ता: फिर्ता बोलाएपछि तनाव
10 घण्टा अगाडि
काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीबाट अलग्गिएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई सम्झिँदा पनि आफूलाई एलर्जी हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । काभ्रेमा बिहीबार…
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मासात गर्न चाहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले जनताको बहुदलीय जनताको मूल्य र मान्यतालाई रक्षा…
काठमाडौँ — पाकिस्तानी राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान साहिद अफ्रिदी ‘एभरेस्ट प्रिमियर लिग’ खेल्नका लागि बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । बिहीबार अपराह्न ४ बजेपछि अफ्रिदी त्रिभुवन…
तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो समय डलरसँग नेपाली रुपैयाँ बलियो बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७८ असार मसान्तको तुलनामा २०७८ साउन मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग…
गगन थापाको प्रश्न : प्रतिपक्षको भूमिका नाराबाजी गर्ने मात्र हो…
७ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण अरु सांसदले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको बताएका…
रामकुमारी झाँक्रीको बायोडाटा सिक्काको दुबै पाटोबाट : संजिव कार्की
आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन् : नरेश रेग्मी
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको योजना : ‘जब पर्यो राति, तब बूढी ताती’
ईश्वर पोखरेलको सम्झनामा : ‘जननेतासँग १४ वर्ष, १० महिना’
श्रीमानको अन्तिम संस्कारपछि…